Sedlauncher: kedu ihe ọ bụ na gịnị ka ọ bụ | Nzukọ mkpanaka
Ọ bụ otu n'ime ebe ndebe akwụkwọ Windows 10 nke na -ebute oke arụmụka n'etiti ndị ọrụ. Ọ bụ enyi ka ọ bụ onye iro? Na post a anyị ga -anwa ịkọwa ihe niile gbasara ya sedlauncher: kedu ihe ọ bụ, gịnị ka ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'ezie ime na -enweghị ya. Ma ọ bụ ọ bụghị.
Tupu ikwu okwu a, a ga -akọwarịrị na anyị ga -ahụ mmemme sedlauncher.exe na ọnọdụ a:
C:> faịlụ mmemme> rempl> sedlauncher.exe ma ọ bụ C:> faịlụ mmemme> rempl> sedlauncher.exe.
Agụnyere ya na Ọrụ Windows emebere iji mee ngwa ngwa ma kwe nkwa ya Windows 10 usoro mmelite.
1 Sedlauncher: kedu ihe ọ bụ
2 Kedu otu esi gbanyụọ Sedlauncher?
2.1 Gbanyụọ Sedlauncher site na njikwa ọrụ
2.2 Gbanyụọ ọrụ Sedlauncher
2.3 Gbochie ọrụ Windows Patch site na firewall
3 Nkwubi okwu ikpeazụ
Sedlauncher: kedu ihe ọ bụ
Nke mbụ, a ghaghị ikwu ya sedlauncher.exe Microsoft jiri ezi ebumnuche kee ya. Ọ ghọrọ akụkụ nke Windows 4023057 ngwugwu mmelite KB10. Ebumnuche nke ndị mepụtara ya bụ maka usoro a iji melite ọsọ nke Ọrụ Mmelite Windows na kọmputa anyị. Ọ dị mma, na ndị nwere ụdị arụnyere Windows 10. Mmelite ndị a na -agụnyekarị ndị ọkwọ ụgbọala mgbasa ozi, ndị ọkwọ ụgbọ ala ọdịyo, ngwugwu ọrụ, wdg.
Ọ dị mkpa ịkọwapụta isi okwu a, n'ihi na mgbe kọmputa malitere ịrụ ọrụ nwayọ ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na a na -emetụta akụrụngwa anyị. malware ma ọ bụ nje. Ma ọ dịghị. Microsoft sedilauncher.exe bu akara dijitalụ.
Nwelite mmelite a na -atọ ụtọ nke ukwuu n'ihi na ọ na -enyere aka ịtọhapụ ohere diski na ngwaọrụ ahụ mgbe ohere zuru ezu iji wụnye mmelite Windows nke ọma. Ihe n'ezie bara ezigbo uru.
Agbanyeghị, enwere ihe na -ebughị n'uche mgbe ebugharị faịlụ a n'ime ngwugwu mmelite Windows 10. Mgbe usoro Sedlauncher bidoro (nke bara ezigbo uru, ekwesịrị ikwu ihe niile, ebe ọ bụ na ndị a bụ mmelite ezubere iji melite arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ), a na -amanye kọmputa anyị ka ọ rụọ ọrụ zuru oke. Nke ahụ emeela akụkụ na -adịghị mma. Mgbe sedlauncher.exe na -agba ọsọ, usoro ọ bụla ọzọ anyị na -agbalị ime na PC anyị, ọbụladị nke dị mfe dị ka imepe folda faịlụ, ga -eji nwayọ nwayọ.
Nke a mere n'ihi ihe niile CPU na -eweghara site na Sedlauncher. Enweghị nhọrọ ọzọ karịa ichere ka usoro a gwụchaa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'oge a anyị enweghị ike iji kọmpụta anyị.
N'ezie ọ bụghị ọnọdụ kacha mma. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji chọta ihe ngwọta iji dozie ya. Ụfọdụ n'ime ha siri ike dịka iwepụ Sedlauncher ozugbo.
Kedu otu esi gbanyụọ Sedlauncher?
Ozugbo anyị matara ozi gbasara Sedlauncher (ihe ọ bụ na ihe ọ na -eme), ọkachasị ịmara na ọ bụ akụkụ nke mmelite KB4023057 Microsoft, ọ bụ oge ikpebi ma ị ga -agbanyụ ya. Iji zaa ajụjụ a, ọ dị mkpa ịtụle ma uru ya karịrị ndọghachi azụ ya ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ihe ndị a ụzọ Ha ga enyere anyị aka gbanyụọ ọrụ a nke ọma ka ọ ghara igbochi ojiji nke ebe nchekwa sistemụ.
Gbanyụọ Sedlauncher site na njikwa ọrụ
Nke a bụ ụzọ kachasị mfe na nke kacha gbanyụọ usoro. N'ezie, anyị nwekwara ike mee ka ọ bụrụ ọrụ ịkwụsị usoro sedlauncher.exe, ebe enwere ike ịhazi usoro na ọrụ niile na -arụ na sistemụ gị site na Onye njikwa.
Iji gbanyụọ ma ọ bụ gbanyụọ Sedlauncher, soro usoro ndị akọwapụtara n'okpuru:
Kwụpụ 1: Nke mbụ, ị ga -emepe Igbe mkparịta ụka "Run" na sistemụ anyị site na ịpị "Windows Key + R" ma ọ bụ site na mmalite menu. Anyị nwere ike pịa akara ngosi Windows anyị nwere n'akụkụ aka ekpe ala nke taskbar. N'ebe ahụ, anyị na -ede "ọsọ" na mmanya nchọta wee mepee mkparịta ụka ọsọ.
Nzọụkwụ 2: Anyị na -amalite Task Manager. Iji mee nke a, na igbe okwu na -agba ọsọ, anyị na -ede ederede 'taskmgr' wee pịa "Inabata".
Nzọụkwụ 3: Mgbe emechara Nchịkọta njikwa Windows, anyị na -ahụ ndepụta nhọrọ dị n'okpuru ogwe menu. N'ime listi a, ị ga -ahọrọ "Usoro" na n'ebe ahụ họrọ nhọrọ «Ọrụ Ndozi Windows".
Kwụpụ 4: Na nhọrọ a anyị pịa bọtịnụ òké aka nri wee họrọ "Mechaa ihe omume ụlọ akwụkwọ".
Kwụpụ 5: Iji mechaa, anyị na -apụ na Task Manager na anyị reboot usoro. Nke a ga -emetụta mgbanwe ndị emere.
Ngwọta a bụ ihe kacha agbanwe agbanwe, ebe ọ na -eji otu mkpịsị mkpịsị mkpịsị aka ewepụ ihe niile Sedlauncher na akụrụngwa anyị. Oge arụ ọrụ nwayọ agala, mana mmelite iji melite sistemụ ahụ akwụsịla. Ọ bụrụ na ị chere na ọ karịrị akarị, ịnwere ike ịnwale usoro a:
Gbanyụọ ọrụ Sedlauncher
Maka nhọrọ a, ị ga -eme ihe site na ngwa nchịkwa ọrụ Windows wee gbanwee njirimara nke ọrụ ahụ. Ọ bụ ụzọ na -adịchaghị mma iji dozie nsogbu ịbelata CPU nke Sedlauncher kpatara. Nke a bụ otu esi eme ya:
Kwụpụ 1: Dị ka ọ dị na usoro gara aga, anyị na -emepe faịlụ Igbe mkparịta ụka "Run" na sistemụ anyị nwere igodo Windows + R ma ọ bụ site na mmalite menu ma ọ bụ site na ịpị akara ngosi Windows dị na akuku aka ekpe ala nke ogwe ọrụ. Anyị na -ede "mee" na mmanya nchọta wee malite mkparịta ụka ogbugbu.
Kwụpụ 2: Ederede anyị ga -abanye na igbe mkparịta ụka bụ nke a: 'ọrụ.msc '. Mgbe emechara nke a, anyị ga -pịa bọtịnụ "Inabata". N'oge a, ajụjụ a nwere ike ịpụta na enyo ma anyị chọrọ ịgba ọsọ dị ka ndị nchịkwa. N'ọnọdụ ahụ anyị ga -aza ee ma gaa n'ihu na usoro a.
Kwụpụ 3: N'ime ogologo ndepụta nhọrọ nke mepere n'okpuru, anyị na -achọ nke otu "Ọrụ Ndozi Windows". Site na ịpị ya anyị na -ahọrọ nhọrọ «Njirimara».
Kwụpụ 4: Na taabụ "General" Na menu nke gosipụtara na elu nke mpio ahụ, anyị na-ele anya n'okpuru maka menu ndọpụta ọhụrụ gbasara «Malite ụdị». N'ebe ahụ, anyị na -ahọrọ naanị nhọrọ "Nkwarụ" anyị na -akwado site na ịpị OK.
Mgbe ịmechara nzọ ụkwụ anọ ahụ anyị malitegharịa kọmputa ahụ itinye mgbanwe ndị ahụ.
Gbochie ọrụ Windows Patch site na firewall
Sedlauncher: kedu ihe ọ bụ, gịnị bụ maka ya na otu esi gbanyụọ ya
Nhọrọ ọzọ enwere ike imebi mmetụta ọjọọ nke Sedlauncher bụ iji firewall chebe ya. Nke a bụ otu anyị kwesịrị isi gaa n'ihu:
Kwụpụ 1: Nke mbụ anyị na -aga na menu "Malite" nke anyị ga -enweta site na akara ngosi Windows dị n'akụkụ aka ekpe ala ihuenyo ahụ. Ụzọ ọzọ ị ga -esi mee ya bụ site na ịpị igodo Windows na ahụigodo anyị. N'ime igbe ọchụchọ anyị na -ede "Windows Defender Firewall" ma anyị họrọ ya.
Kwụpụ 2: Ọzọ, na menu aka ekpe anyị pịa "Nhazi di elu". Anyị nwere ike nweta igbe nwere nhọrọ iji "Gbaa ọsọ dị ka onye nchịkwa." Ọ bụrụ otu a, anyị ga -aza ee.
Kwụpụ 3: Laa azụ na menu n'akụkụ aka ekpe, anyị na -ahọrọ "Ọpụpụ iwu" na enwere nhọrọ "Iwu ọhụrụ" na anyị ga -ahụ na akụkụ aka nri elu nke windo Firewall Windows.
Kwụpụ 4: Window mmapụta ga-apụta n'ihu anyị nwere nhọrọ dị iche iche. N'ime ya ka anyị na -ahọrọ nke otu n'ime ya "Mmemme" na anyị na -akwado site na ịpị "na -eso".
Kwụpụ 5: N'okpuru usoro mmemme, anyị pịa bọtịnụ "Nyochaa". Nke a ga -eduga anyị ozugbo na ọnọdụ nke "Ọrụ Windows Patch" site na PC anyị. Ebe kpọmkwem ebe ihe anyị na -achọta dị bụ C:> faịlụ mmemme> repl.
Kwụpụ 6: Omume ikpeazụ anyị ga -emerịrị bụ ịhọrọ faịlụ akpọrọ "Sedvsc.exe" wee mechie mkpọchi ahụ site na ịpị nhọrọ nkwado ndị a ga -egosi n'okpuru. Mgbe ahụ ọ ga -ahapụrụ naanị aha aha n'iwu ọhụrụ a, pịa "Mechaa".
Ọ nwere ike ime na, mgbe ị gbanyụrụ Sedlauncher ịgbaso usoro a, a na -ebudata patch ahụ na kọmputa anyị na akpaghị aka. Ọ bụrụ na nke a emee, anyị ga -emerịrị ya megharịa Windows Firewall anyị ma ọ bụ ihe ọzọ budata antivirus nwee ike igbochi ya. Ọ bụrụ na ngọngọ ahụ dị irè, enweghị ike gbuo ya na PC anyị.
Ugbu a ị matara ụzọ atọ kachasị dị irè ma dị nchebe iji gbochie ma ọ bụ wepu Sedlauncher, a ka nwere akụkụ kachasị sie ike: mee mkpebi ime otú ahụ. Ọ bụghị na site n'ịgbanyụ mmemme a, ụfọdụ ọdachi na -enweghị olileanya ga -adakwasị kọmpụta gị, mana ị ga -amatarịrị na ị ga -atụfu ọrụ ọ na -enye, nke metụtara arụmọrụ PC gị kacha mma.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ na -esiri gị ike iwepu Sedlauncher, ị ga -eche na kọmputa gị nwere ike jiri nwayọ na -agba ọsọ. Ọbụlagodi mgbe ụfọdụ ọ na -aghọ "ahụ mkpọnwụ." Na nke a bụ mmemme na -eri oke ohere diski. Mgbe ụfọdụ ruo 100% nke CPU.
Dị ka ihe niile dị na ndụ, ọ gbasara na -atụle ihe ize ndụ na uru. Nke a na-abụkarị usoro mkpebi: ị na-atụfu ihe iji nweta ihe. Na ụkpụrụ ka mma. Onye ọ bụla, ya bụ, onye ọrụ Windows ọ bụla, bụ ụwa. Kwe ka onye ọ bụla kpebie ihe masịrị ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Sedlauncher: kedu ihe ọ bụ na ihe ọ bụ maka ya
Pokémon dịrị n'otu maka PC: ọ ga -ekwe omume?